Ngu: Vuyo Flente
Centane: Sityelele iintsapho ezichaphazeleke yintlungu yokudutyulwa kwamalungu wentsapho zawo, ilungu losapho luka mfundisi ngu Manene Cithwa nosixelele ukuba belusapho baxheleke kakhulu emphefumlweni ngesisehlo sokubulawa komfundisi ecaweni kuba lonto iyaqala ukwenzeka kweli lizwe.
Ukanti othethel’ usapho lako mkhulu uKwedinana Nteseyiya Bushenge uthi belusapho abakazamkeli tu ezindaba kuba uNkosi bebethembele kuye, kwaye kuzo zonke iziganeko ezathi zehla kwelilizwe zange beve kuthiwa inkosi ibulawelwe emzeni wayo.
Unobangela walombhodamo ngumhlaba okokhiwe kuwo icawe umrhanelwa utyhola ngokuba ngumhlaba wakhe owathi wawuboleka icawe ukuba ikhonzele kuwo kodwa emveni kokuba ethe waqhekeka kule cawe wafuna umhlaba wakhe.
Kuvakala ukuba ngolwesine weveki ephelileyo ilanga lihlabe umhlaba umrhanelwa olipolisa wafika kwicaw’ ezinze kwilali yaku Nontshinga ku Centane, kuvakala ukuba ufike nje wathulula ngembumbulu kumfundisi ebehlel’ emotweni yakhe ngaphakathi kumasango etyalike, wabuya wadubula wabulala nomzalwana kodwa omnye kubo uye wasinda.
Abasebenzi ebebe sakha ityalike leyo benze owenkawu umtsi uku sindisa iimpilo zabo. Umrhanelwa uye wadlula wayongena kwi komkhulu nalapho athe wathulula ngembumbulu kwi Nkosi yelali yasweleka. Umrhanelwa uthe wabanjwa ngamapolisa aku Centane kwaye uzovela enkundleni yamatyala ajamelane nezityholo.
Abadutyulwe ngumrhanelwa ngu mfundisi webandla uRev Cithwa, inkosi yasekuhlaleni uNkosi Bushenge kunye nomzalwane webandla uMnu Ntsompo omnye othe wadutyulwa uthe wasinda.